Tolo-kevitra adala sy mahatsikaiky Kamprani miaraka amin'ireo zavatra tsy mahataitra | Famoronana an-tserasera
Androany isika dia handao toerana kely ho an'ny a andiana zavatra isan'andro izay azo avela ho tsy misy ilana azy indrindra izay efa hitantsika hatry ny ela. Raha ny marina dia natao hanana tanjona tsy misy ilàna azy mifanaraka amin'ny foto-kevitr'izy ireo izy ireo.
Angamba ny zavatra liana indrindra amin'ny volavolain-dry zareo dia ny mitady tsy misy ilana azy ho foto-kevitra fototra. Katerina Kamprani no mpanakanto ao ambadik'ireto andiana sanganasa kanto ireto izay noforonina miaraka amin'ny foto-kevitra fototra tsy misy ilana azy hatramin'ny fotoana nanamboarana azy ireo.
Raha ny tokony ho izy, soa ihany fa natao tahaka izany amin'ny 3D izy ireo, ka tsy misy na inona na inona mitranga omeo sary an-tsaina kely ary manandrama mamorona endrika tsy azo atao. Ny iray amin'izy ireo, toy ilay fantsom-panafody izay "mihazakazaka" dia tonga lafatra mba hanehoana izay helo resahintsika.
Toy ireo kaopy roa natambatra tamin'ny fototr'izy ireo tamin'ny iray sy ireo tsy azo atao ny misotro, na dia niandany tamin'olona hafa aza isika; eny, afaka manandrana foana ianao.
Kamprani dia efa mampitandrina amin'ny tranokalany fa ireto volavola natao ho tsy misy ilana azy ary miasà aberrations. Ny zavatra ratsy indrindra dia ny fanekena fa misy ny manana ny lanjan'izy ireo sy ny fahombiazany raha tsy azo atao izany.
Tena ilay Ny tanjon'ity mpanakanto grika ity dia ny hanananao fihomehezana ary mitsiky no hita eo amin'ny tavanao. Raha mijery an'io prisma io isika, dia azontsika atao ny mitazona io "bracelet" io izay tsy afaka ampiasaina raha tsy miala amin'ny sisiny mitovy isika.
Sa izay borosy noforonina tamin'ny fomba izay saika tsy azo atao, raha tsy hoe te hampiasa azy io toy ny hoe manana borosy mitazona ilay kitay amin'ny totohondrinay isika. Afaka mandeha amin'ny tranokalan'ny kaprani hahitana ny sisa amin'ny forongony adala. Raha lasa adala isika dia tandremo ny Burning Man 2019 sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo ve no endrika entana tsy misy ilana azy isan'andro?
Adobe dia manome vola 1 tapitrisa euro ho an'ny famoronana noho ny COVID-19